Ukutya okugqibelele kwenja enesifo sohudo - Inja Impilo
Ukutya okugqibelele kwenja enesifo sohudo
Abanini bezilwanyana ezininzi bayazibuza ukuba yondla njani inja kurhudo. Yimeko eqhelekileyo kwii-canines ezinezizathu ezininzi. Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo zezinja ezinesifo sohudo ezinokudibana nazo kuya kukunceda uthathe isigqibo sokuba ungalinceda njani ilungu lakho losapho elinemilenze emine.
Iindidi kunye noonobangela bohudo kwiinja
Ayisiyonto ehlekisayo xa inja ine-poo runny. Ngamanye amaxesha, iisisu esimoshakeleinenkcazo elula, efana 'nenkunkuma' apho inja itya into engafanelekanga. Ngamanye amaxesha umfanekiso unzima ngakumbi kuba urhudo ezinjeni luhlala luphawu endaweni yokufumanisa isifo. Abazali bezilwanyana kufuneka baxoxe nodokotela wezilwanyana ukuba inja yabo inesifo sorhudo esiqatha okanye esinganyangekiyo ukuze ifumane okona kutya kulungileyo.
Imiba Yezempilo Yezinja
Inja yeRottweiler Inzala yeNyaniso kunye neefoto
Yintoni yokondla inja ngesifo sohudo esibuhlungu
Urhudo olunamandla luza ngesiquphe kwaye ebekhona ixesha elingaphantsi kweveki. Njengokuzenzekelayo, urhudo olubi ludla ngokuba sisiphumo senkunkuma, utshintsho olwenziwe ngesiquphe kwindlela yokutya, okanye ukosulelwa ziintsholongwane. Ukutya kudlala indima ebalulekileyo kunyango olunempumelelo. Yondle ukutya okungalunganga kwaye wongeze ukukhathazeka.
Hlela kwakhona iNkqubo yokuGaya
Isifo sohudo esiqatha apho inja ichaneke khona, kufuneka uphumle inkqubo yokugaya ukutya. Ngokubamba ukutya iiyure ezingama-24 kuvumela amathumbu ukuba alungise kwaye achache. Nokuba kuyondliwa inja ngeli xesha kuyaphikiswa, kodwa uluvo olwamkelwe ngokubanzi kukuba ukutya kukhuthaza kuphela amathumbu ukuba angene kwisivumelwano kwaye kwandise ixesha lokugula kwenja enesifo sorhudo.
Kuphephe Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni
Soloko uqinisekisa ukuba amanzi okusela acocekileyo awaninzi afumanekayo. Inja iyakudinga ukusela into eninzi endaweni yolwelo olulahlekileyo kurhudo. Ukuba akaseli, ngokoukuphelelwa ngamanzi emzimbeningumngcipheko, ke funa ingcebiso kugqirha wezilwanyana ukuba ufanele ukubonwa na.
Ukutya kweBland kweenja ezinesifo sohudo
Emva kweeyure ezingama-24 ukuphinda uqalise ukutya okungafunekiyo (endaweni yokutya rhoqo) kwinja.
Ulawulo lwesithupha lokutya kwenja ye-DIY kukubonelela nge-bland, inyama emhlophe okanye enamafutha asezantsi, kunye nokulula ukugaya i-carbohydrate enje ngeetapile ezibilisiweyo, ipasta, okanye irayisi.
Gwema ukunambitheka ngobisi, ibhotolo, ukhilimu, okanye ioyile, njengoko kwizinja ezisempilweni ezinokubangela urhudo kwezinye iimeko.
Abanye abanini bezinja baya kuzondla izinja ngamaqanda orhudo, ngakumbi amaqanda aqhekeziweyo, athi kufuneka ithintelwe njengamaxesha ngamanye banokuyandisa ingxaki.
Eyona ndlela ibhetele yokutya eBland
Ukutya kwenja okufanelekileyo ukunyanga urhudo kubandakanya ukudibana:
Iitapile ezimhlophe ezibilisiweyo okanye iitapile ezicujiweyo (akukho bisi okanye ibhotolo)
Irayisi emhlophe ebilisiweyo okanye ipasta okanye i-millet
' Iiproteni ezipholileyo 'njengenkuku ebilisiweyo engenasikhumba, umvundla okanye intlanzi emhlophe
Umhlaba we-turkey, ubhakwe njengesonka
Plain ithanga enkonkxiweyo(hayi umxube wepayi wethanga!)
Inyama yenkomo yomhlaba, ikhutshiwe ngamanqatha
Esinye isithako esiqhelekileyo esisetyenziselwa izinja ezinesifo sohudo ngamanzi erayisi.
Nje ukuba inja yakho izive ingcono, okunye ukutya kunokunceda kwizitulo zakhe ezithambileyo zezi:
I-yogurt engenanto okanye i-cottage cheese
Abanini bezinja banokucinga ukuba ithanga enkonkxiweyo yinto engaqhelekanga ukondla izinja zabo, kodwa kunjalo Umthombo ogqwesileyo wefiber . Ngokongeza ifayibha ekutyeni, kubangela isitulo senja ukufunxa amanzi amaninzi kwaye kunciphise inqanaba le-PH yamathumbu. Ifayibha nayo inokunceda ekukhuleni kweebacteria 'ezilungileyo' ezinceda inkqubo yokusebenza ukuba isebenze ngokufanelekileyo. Ifayibha ethanjisiweyo enkonkxiweyo inokukunceda ukunciphisa ukukhula kweentsholongwane 'ezimbi' ezikhokelela kumathumbu agulayo kunye norhudo.
imibuzo enzulu ukubuza intombi yakho
Iindlela eziqhelekileyo zokupheka ukutya kweBland
UKUYA ukutya okuqhelekileyo izinja ngumxube we-75% ephekiweyo yerayisi emhlophe ukuya kwi-25% yeeprotein. Iprotein inokubiliswa ibele lenkukhu, ibele le-turkey okanye inyama yenkomo yomhlaba ukuba nje ikhanyisiwe kuwo onke amanqatha. Okunye ukutya okuqhelekileyo okucetyiswayo nguGqirha Karen Becker kubandakanya ukwenza umxube we-50% we-turkey ephekiweyo kunye ne-50% yethanga enkonkxiweyo. Unokufaka endaweni yethanga eliphekiweyo elitsha, ibhatata ephekiweyo okanye iitapile ezicujiweyo kwangoko.
Yondla inja yakho ngenxalenye encinci yokondliwa okumbalwa:
Ukondla ngesiqhelo ikota yakhe yesiqhelo yokukhonza eqhekezwe kukutya okuninzi imini yonke.
Yondla enye ukuya kwezine amacephe wethanga enkonkxiweyo, ukuqala ngecephe linye kwaye ngokuthe ngcembe ukongeza ngakumbi kwizidlo zakhe.
Ukuba urhudo aluphindi lubekho kwaye xa inja yenja isiqala ukubakho, ungonyusa kancinci isixa osondlayo uhleli ngakwenye kwaye ngokuthe ngcembe uyitshintshele inja yakho kukutya okuqhelekileyo.
Namathela ngokungqongqo kwisidlo
Jonga inja yakho nakuphi na ukuphinda urhudo kwaye uphephe ukunika inja ukuphatha okanye ukuhlafuna ngeli xesha. Itafile ezilahliweyo aziyombono ilungileyo kwaye zimbi ngakumbi inja enesifo esibuhlungu samathumbu.
Ugqirha wezilwanyana unokucebisa ukuba unike inja yakho OTC amayeza yoxinzelelo lwesisu njenge Kaopectate okanye UPepto Bismol . I-Imodium nayo inokuphakanyiswa nangona inokubangela iingxaki kwezinye iintlobo ezinje ngeCollies kwaye inokunikwa ixesha elifutshane. Ungaze unike inja yakho nayiphi na iyeza ngaphandle kokuthetha nodokotela wezilwanyana kuqala kwaye ulandele imiyalelo yakhe yedosi ngononophelo.
Yintoni yokondla inja enesifo sohudo esinganyangekiyo
Urhudo olungapheliyo luye lwaqhubeka ngaphezulu kweentsuku ezisixhenxe okanye i-waxes kunye ne-wanes (iimpawu ziyafika zihambe) kangangeeveki okanye iinyanga. Isifo sorhudo esinganyangekiyo sihlala sivela xa isisu esikhathazayo luphawu lokuba inja inengxaki yangaphakathi enjengesibindi okanye isifo sezintso, ukutya komzimba, okanye iingxaki kodonga lwamathumbu.
Thetha kugqirha wezilwanyana
Kumatyala orhudo olungapheliyo, umfanekiso unzima ngakumbi. Kubalulekile ukuthatha inja yakho ukuya kugqirha wezilwanyana ukuze iphande oyena nobangela wohudo kwimeko enokubangelwa yimeko yonyango.
Unyango lweDiary of diarrhea engapheliyo
Umxube wamayeza, izongezo zokutya, kunye nokutya okufanelekileyo okufana nokutya kwenja yokuyalela kuya kumbuyisela emgceni kwaye kubuyele kubunzima obusempilweni. Okunye ukutya okuqhelekileyo okufumanekayo kwezinja ezinesifo sorhudo zezi:
Ukutya kweHill's Prescription Di / i / d Canine Stress Rice, Vegetable & Chicken Stew - Inja enesifo sorhudo esinganyangekiyo inokuba noxinzelelo olungafanelekanga olukhokelela kwimpilo yesisu esingafunekiyo. Le ndlela yokutya ine-microflora yokunceda ukubuyisela ukulungelelana kwebacteria yamathumbu, kunye nefayibha ephezulu kunye namafutha asezantsi. Oku kutya kufuna amayeza onyango lwezilwanyana.
Isidlo seNduli yokutya kwabantu abadala Isisu esinovakalelo kunye nolusu lweesalmon kunye nokutya kwemifuno kungenisa ukutya kwenja -Ifumaneka kwifomula enkonkxiweyo, ugqirha wezilwanyana unokucebisa oku kutya ukuba isifo sorhudo esinganyangekiyo senja yakho kungenxa yokuphendula kwizithako ezithile zokutya. I-Hill ikwathengisa ingxelo eyomileyo, d / d I-Canine Potato kunye nefomula yedada .
IproPlan EN yeGastroenteric Fibre Canine Ifomula Unomxholo ophezulu wefayibha kunye nefayibha prebiotic enceda ukuxhasa inja yakho yamathumbu emathunjini. Iza kuguqulelo olomileyo nolutotyiweyo kwaye kuya kufuneka ube nemithi yokuthenga izilwanyana.
I-Royal Canin enkulu yoKhathalelo lweNja yokutya yenzelwe ngokukodwa izinja ezinkulu ezineengxaki zokwetyisa. Ukutya kuneprotini ekumgangatho ophezulu, microflora kunye nefayibha yokugaya. Akukho mfuneko yokuba amayeza amiselweyo nangona kufuneka uxoxe ngokukhetha oku kutya kunye nodokotela wezilwanyana ngaphambi kokuba usebenzise.
Urhudo lwenja yimeko eqhelekileyo, ke thetha nogqirha wezilwanyana ngaphambili inja yakho ine-bout, yeengcebiso kwiukunyanga isifo sorhudo ekhayangamayeza asekhaya okanye amayeza e-counter. Ngelixa ezininzi izinja ziya kuba nesifo sohudo ngaxa lithile, unokunceda ukuthintela iimeko ezinzima:
Ungaze utyise iziqwenga zetheyibhile yenja okanye ukutya okuqhwethayo.
Gcina usesikhathini ngelonke ugonyo.
Sukuvumela isilwanyana sakho ukuba sitye amathambo, izinti okanye amatye.
Yiba rhoqoUvavanyo lwezilwanyana kwiintshulube.
Yondla ukutya okunezondlo.
Zilolonge inja yakho rhoqo kwaye uyigcine kubunzima obusempilweni.
Kwimeko yokuqala, kuba inja engachananga, phumla inkqubo yokugaya ukutya iiyure ezingama-24. Emva koko phinda wenze ukutya okungenamdaka njengeetapile ezibilisiweyo, ukondla kancinci kwaye rhoqo. Ukuba inja iya isiba mandundu, njengokugabha,ukutya ukutya, okanye ukuvelisa igazi yise inja kugqirha wezilwanyana.
Unxibelelana nini neVet
Kuba urhudo lunokuba yimpendulo yokuphelisa indalo kwii-canines, akusoloko kuyimfuneko ukuthatha inja kugqirha wezilwanyana xa kufikwa kumqondiso wokuqala wezihlalo ezibalekayo. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba inja ayibonisi enye malunga neempawu. Ukuba isifo sorhudo sithatha ngaphezulu kosuku okanye ezimbini, a biza ugqirha wezilwanyana ngumbono olungileyo.
Ukuba isilwanyana sakho sibonisaezinye iimpawuUya kufuna ukubiza ugqirha kwangoko. Ezi mpawu zibandakanya:
Ukuthamba, uxinzelelo okanye iimpawu zokuziva ungaziva mnandi
Iintsini ezimdaka, okanye iintsini ezilubhelu
Izitshixo ezimnyama okanye ezilindileyo ezifakiwe
Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni
Idyasi ekrwada okanye emnyama
Kukho iimeko ezithile eziqinisekisa ukunxibelelana nogqirha wezilwanyana.
Inja inokuba itye into eyityhefu.
Inja ayigonywanga ngokupheleleyo.
Ukunyanga Inja Yakho Ngesifo sohudo
Xa inja yakho inesifo sohudo, inokuba nexhala. Nangona kunjalo, amaxesha amaninzi xa ephile qete, ukhathalela inja ekhaya ngokondla ukutya okungafunekiyo kweetapile ezibilisiweyo okanye ukutya okufanayo, kwanele. Gcina ujonge ilindle yenja kwaye ukuba inika isizathu sokukhathazeka, jonga ugqirha wezilwanyana kwangoko.
Iipet Tips Inja Ingcali Udliwanondlebe Amakhethini E Dapes Isiselo Somdiliya Ikhalenda Yokukhulelwa
zingaphi izibane ezimnyama endizifunayo epatini
Ngaba i-geminis kunye ne-sagittarius ziyavana
inja umbongo kumnini emva kokufa
xa umfazi gemini enzakele
undazi kangakanani mibuzo
Isizwe Kunye Nenkcubeko Costumes